Dawladda Jasiiradaha Fiji Ayaa Sheegtay Inay Raacayso Istaraatiijiyada Xashiishadda Xashiishadda • Daroogada Inc.eu
Dowladda Fiji ayaa sheegtay inay waddo istaraatijiyad xashiishad ah
Fiji ayaa qorshaynaysa in lagu daweeyo xashiishadda oo kaliya marka la eego hemp, Xeer-ilaaliyaha Guud iyo Wasiirka Dhaqaalaha Aiyaz Sayed-Khaiyum ayaa u sheegay baarlamaanka dalka.
1 Marijuana si fiican ayey u koraan
2 Awoodda hemp ee Fiji ayaa sii baaray
Dawladdu waxay sheegtay inay durba bilowday daraasad ujeeddadeedu tahay horumarinta hemp sidii dalagga beeraha ee dhammaan jasiiradaha iyada oo lagu maalgelinayo miisaaniyadda 2021-2022.
Wasiirka ayaa sheegay in istaraatiijiyadu aysan quseyn beerista madadaalada marijuana ama xashiishadda oo sarreysa THCnuxurka ujeedooyin daawo. Taa bedelkeeda, barnaamijku wuxuu diiradda saari doonaa soo saarista alaabada fiber hemp, sida xarig, iyo abuur cunto.
Marijuana si fiican ayey u koraan
Dawladdu waxay rajaynaysaa in horumarinta warshadaha hemp ay ugu dambayn beddeli karto ganacsiga xashiishka sharci-darrada ah, Sayed-Khaiyum ayaa yidhi. Booliiska Fiji ayaa qabtay dhir xashiishad ah oo lagu qiyaasay qiimaha waddada in ka badan $ 2020 milyan sanadka 321. Taasi waxay ka badan tahay saamiyada la qabtay oo qiimihiisu yahay 68 milyan oo doolar sannadka 2018.
Wasiirka ayaa sheegay in Fiji uu kala tashan doono Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Daroogada iyo Dambiyada iyo Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay sameynta sharciyada barnaamijka hemp warshadaha. Sharciga adag ee xakamaynta maandooriyaha ee Fiji wuxuu u baahan yahay in wax laga beddelo si loo banneeyo soo -saaridda alaabta hemp warshadaha.
“Si aan u aragno meesha ugu fiican ee lagu beero hemp warshadeed, goorta la beero, tusaale ahaan, waa inaan eegnaa suuqyada, yaa iibsan doona, meesha aan ku iibin karno; waa inaan eegnaa baahida cimilada iyo ciidda, ”ayuu wasiirku u sheegay warbaahinta.
Awoodda hemp ee Fiji ayaa sii baaray
Wasaaradda Beeraha ee Fiji, maamulada maxalliga ah iyo hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah waa in lala tashadaa oo waaxda gaarka loo leeyahay la sahamiyaa awoodda ay u leedahay inay horumariso tas -hiilaadka wax -soo -saarka iyo inay soo jiidato maalgashi.
Xukuumadda Fiji ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la ballaariyo waaxda beeraha si loo yareeyo ku tiirsanaanta dalxiiska oo ah ku dhawaad ​​40% wax -soo -saarka guud. Kalsoonidaas xad dhaafka ah ayaa si aad ah u muuqatay intii lagu jiray xiisadda coronavirus, dowladda ayaa tiri.
Awoodda hemp ee Fiji ayaa si faahfaahsan loo baaray (afb.)
Dhaqaalaha beeraha ee Fiji wuxuu ku salaysan yahay dalag aad u tiro badan, oo ay ku jiraan dhir udgoon, lows, miro iyo khudaar. Beeralayda dalka ayaa dhawaanahan helay guulo koray xidid kava, kaas oo loo isticmaalo ka -hortagga cadaadiska ee Koonfurta Baasifigga.
Ilo wareedyo ay ka mid tahay FbcNews (EN), Fiji Times (EN), Tuulada Fiji (EN), HempToday (EN)
"Cannabisku wuxuu noqon doonaa mid sharci ah ama waqti ka dambeeya"
Luxembourg waa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee raba inuu bixiyo xashiishad nidaamsan. Sidoo kale wadamada kale ee ka tirsan Midowga ...
Waxaa la xukumay tan iyo 2015, hadda wejiga yar ee Jamaica ee xishoodka
Jamaica waxaa ku yar xashiishadda. Roobab mahiigaan ah oo ay ku xigto abaar daba dheeraatay, koror ...
Sharciyeynta jilicsanaanta G. Taasi waa waxa Duqa magaalada Paul Depla u maleeyay markuu ...